CFM momba ny fifidianana : “Mba tsy hidirana ny fiainan’olo-manokana” | NewsMada
CFM momba ny fifidianana : “Mba tsy hidirana ny fiainan’olo-manokana”
“Hiatrika ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsain’ny Tanàna isika atsy ho atsy. Fifidianana manaiky kokoa ny vahoaka izy io. Saika olona misy mahafantatra ireo mpifaninana: mpifanolo-bodirindra.” Io ny nambaran’ny filohan’ny Conseil du fampihavanana malagasy (CFM), i Maka Alphonse, manoloana ny fiatrehana fifidianana kaominaly.
Satria keky kokoa ny fari-piadidiam-pifidianana: any amin’ny fiainana manokan’ny olona no ahina mety hiadian-kevitra na voizina fa tsy momba ny fampandrosoana ny kaominina. Manao antso avo ny CFM hitandremana ny soatoavina maha Malagasy. Tsy mpandrafy ireo kandidà fa mpifaninana.
Mba ho fifidianana tomponandraikitra no hatao
Handinika ny pitsompitsony rehetra hiatrehana ny fifidianana ny CFM amin’ity herinandro ity. Mbola hitovy endrika amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika sy ny fifidianana solombavambahoaka ve ny hatao sa hovaina ny fanentanana ny mpiray tanindrazana amin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsain’ny Tanàna?
Mba hifidy olona tomponandraikitra marina ny mpifidy fa tsy ho zavatra hafa no hanentana ny safidiny. Ho tena faharesen-dahatra ny hifidianana olona, heverina fa hitondra ny tanàna sy hampandroso ny kaomanina.
Mba hisian’ny fitoniana sy ny fifidianana tena tomponandraikitra, handray anjara amin’ny fanentanana ny CFM miaraka amin’ireo rantsa-mangaikany. Rehefa tapaky ny fivoriambe izay hatao, vao hanatona ireo mpiara-miombon’antoka ny CFM: ahoana ny hampiraisana ny hery hiatrehana io fifidianana io?
Hanatona manokana ireo kandidà ny CFM
Eo anatrehan’izany, hanatona manokana an’ireo mpifaninana hisian’izay fifidianana ao anatin’ny firahalahiana sy ny fihavanana. “Fa tsy fifanaratsiana sy ny fifampihantsiana no hahazo laka eto amintsika”, hoy izy. Izay hahasoa ny mpiara-belona sy ny kaominina ary ny tanindrazana no tokony hatao vaindohan-draharaha.